Ku aamin aamin jiir iyo teebabka shaqada, ma u qalantaa? | War gadget
Ku aamin aamin jiir iyo teebabka shaqada, ma u qalantaa?
El Telecommuting Waxay noqotay wax caan ku ah xirfado badan maanta, xaqiiqdii, waa inaan mudnaanta siinaa farsamadan foosha ah dadka kale markasta oo ay suurta gal tahay dabcan. Si kastaba ha noqotee, shaqaale badan ayaan diyaar u ahayn inay wajahaan suurtagalnimada inay shaqo ka aasaastaan ​​guriga.
Qalabka kumbuyuutarku wuxuu noqday qayb lama huraan ah markay tahay inay naga caawiso maalinteena shaqada, taasi waa sababta Actualidad Gadget dhawaanahan aan ugu keeneyno falanqeyn faro ku tiris ah oo diirada lagu saaray waaxdan. Waxaan kuu soo qaadaneynaa falanqaynta qaar ka mid ah teebabka Trust iyo jiirka si aad u ogaatid midka ku habboon baahidaada.
1 Kiiboodhka ODY iyo baakadka jiirka
2 Jiirka bilaa biraha ah ee Ozaa
Kiiboodhka ODY iyo baakadka jiirka
Waxa ugu fudud ayaa ah in marwalba sharad lagu dhigto kumbuyuutar iyo jiirka oo shaqeynaya "gacanta gacanta" oo si otomaatig ah u hagaajinaya. Sidaa darteed, haddii aad dooneysid inaad hal buur korisid Mudanayaasha shaqada xafiiska otomatiga ee guriga, xirmooyinkaani waa kuwa ugu fiican.
Noocyo badan sida Logitech, Trust ama Genius ayaa bixiya isku-darka noocan ah ee leh teebabka iyo jiirka. Taladeenu waa in cimri dherer had iyo jeer loo aado alaab ka samaysan caag madow iyo sida ugu fudud ee suurtogalka ah.
Xaaladdan oo kale waxaan diiradda saaraynaa qaabka ODY Trust, Kabadh kumbuyuutar iyo jiir oo wata nidaam aamusnaan gaar ahaan muhiim u ah shaqada telefoonka. Gurigeenna waxaan u baahanahay aamusnaan dheeri ah maxaa yeelay meel aad uga cufan sidii caadiga ahayd waa inaan ku qabannaa hawlaheena isla markaana iska ilaalinaa qaska ama xubnaha qoyska.
Labada jiir iyo kiiboodba kiiskan labaduba waxay leeyihiin badhanno iyo furayaal xuub aamusan. Imtixaanadayada ka dib waa inaan dhahnaa in kumbuyuutarku si gaar ah u xasilloon yahay, hase yeeshe, waa la sameyn karaa dhif u ah isticmaalaha joogtada ah sababtoo ah jawaab celin la'aan in aan ogaan karno markaan iyaga riixeyno.
Iibso kiiboodhka aaminka ah iyo xirmada jiirka kaliya 24,99 euro
Sida kiiboodhka, Waxaan haysannaa illaa 13 fure oo horay loo qaabeeyey oo loogu talagalay labada Microsoft Office iyo maareynta warbaahinta badan. Sida iska cad, kumbuyuutarkan, sida kuwa ku foogan shaqada telefoonka, waxay leeyihiin kumbuyuutar lambar leh tuuryo iyo quful. Midigta sare waxaan ku leenahay seddex nal oo LED ah taasi waxay muujin doontaa waxqabadyada ku habboon.
Kumbuyuutarka, qaybtiisa, sidoo kale waa mid u adkaysata daadinta, taasi waa, waa inaanan ka walwalin haddii aan ku shubno koob biyo ah ama kafeega dushiisa, in kastoo sababo muuqda awgood aanan awoodin inaan tijaabino muuqaalkan.
Kiiboodhka iyo jiirka labaduba waxay kuxiran yihiin isla dekedda USB. Xaaladda jiirka, waxay leedahay daahan caag ah oo dhinacyada ah oo loogu talagalay raaxo weyn iyo qallooc aan yareyn. Badhan korka ku yaal si loo maareeyo xawaaraha tilmaamaha, haa, waxaan u seegnay badhannada dhinaca si deg deg ah loogu soo galo.
Gadaasha dambe, kiiboodhku wuxuu leeyahay nidaam wax lagu qaado, si kastaba ha noqotee, waxaan kugula talinayaa inaad had iyo jeer ku isticmaashid qaab "flat" ah si aad uga fogaato xanuunka curcurada aan inagu soo aragnay. Haddii kale, kumbuyuutarku wuxuu leeyahay qaab-dhismeed wanaagsan illaa inta aad la qabsanayso taabashadiisa iyo iska caabbinta.
Kiiboodhkan iyo jiirka ODAY waxaa qoray Trust waa la jaan qaada labada Windows iyo macOS iyo Chrome OS, sidaa darteed marka la eego guud ahaan dhibaatooyin badan nagama la kulmi doono isticmaalka maalinlaha ah. Qiimaha lagula taliyay alaabtaan waa 24,99 euro, waad ku iibsan kartaa qiimaha ugu fiican Amazon at LINKAN.
Jiirka bilaa biraha ah ee Ozaa
Waxaan hadda ka hadleynaa jiirka, xarunta labaad ee kontoroolka weyn ee kumbuyuutarkeena, xaaladdan moodeelka Ozaa de Aamin. Sida iska cad, waxaan ka helnay inay si macquul ah ugu ekaato jiiryada kale ee dhamaadka sare ee shirkadaha tartamaya qaar ka mid ah, oo ah wax aan daruuri ahayn qodob xun, gaar ahaan haddii aan tixgelinno qiimaha.
Jiirkani waa Bareesada & Ciyaar oo wuxuu leeyahay qalab qaata USB, oo aragti ahaan daboolaya ilaa 10 mitir, wax aan si dhib yar u hubin doonno, maxaa yeelay ma arki doonno shaashadda haddii ay dhacdo. Ma laha Bluetooth ama nooc kale oo tiknoolajiyad wireless ah, markaa waa inaad qabsataa dekedda USB-ga.
Waxay leedahay dusha sare a Tilmaamaha baytariga LED kaas oo dhalaali doona casaan. Jiirku wuu galaa "Habka jiifka" si aad u kaydiso batteriga si otomaatig ah, wayna "soo toosi doontaa" adiga oo riixaya badhan kasta ama sameeya dhaqdhaqaaq lama filaan ah. Marka laga reebo waxaas oo dhan, muujinta ayaa ah inaan ka helno baytariyo lithium ah oo dib loo soo celin karo.
Sida kumbuyuutarka iyo qalabka jiirka ee aan horay uga soo hadalnay, tan waxaan sidoo kale helnaa badhanno aamusan dhammaan kiisaska. Waxaa gebi ahaanba laga sameeyay balaastik oo leh faahfaahin yar oo ku jirta aluminium, dhinacyada waxaa laga sameeyay silikoon caag ah si loo hagaajiyo xajinta.
Sida iska cad waa shey khafiif ah bacda la soo saaray awgood, si kastaba ha noqotee, shaqsiyan waxaan u arkaa badhamadiisa dhinaceeda inay aad u faa'iido badan yihiin, halkaas oo aan awood u yeelan doonno inaan ku dhex wareegno "gadaal" iyo "soo socota" iyo giraangir dhinaca ah si aan ugu raaxeysan karno raaxo dokumentiyada. Guud ahaan, lix badhan si loo hagaajiyo wax soo saarka.
Waxaan ku iibsan karnaa saddex midab oo kala duwan, buluug, madow iyo caddaan. Sidaad u aragto, cutubka aan ku tijaabinay gorfeynteena waa midka cad, in kastoo aan idhaahdo buluug cagaaran ayaa laga yaabaa inuu yahay midka ugu soo jiidashada badan, si kastaba ha noqotee, waxaan ka faa'iideystaa fursad aan ku muujiyo inay tahay inaan mar walba u tagno midabka madow haddii waxa aan raadineyno ay yihiin adkeysi iyo nadaafad.
Ma hayno qiyaas gaar ah oo ku saabsan nolosha batteriga, intii lagu jiray tijaabadeenna oo ka badan toddobaad ma aanan u baahnayn inaan lacag ka qaadno. Wadarta miisaanka ayaa ka badan 100 garaam, markaa waa raaxo, waana mid si buuxda ula jaan qaadi karta labada Chrome OS iyo Windows iyo macOS.
Jiirkani wuxuu ku kacayaa qiyaastii 49,99 euro, hase yeeshe, hadda waa lagu jiraa ku siiso Amazon qaybteeda madow kaliya 39,99 euro, taas oo ka dhigan qiimo dhimis dhan 20%. Waxaad ka iibsan kartaa LINKAN qiimaha ugu fiican iyo dhammaan dammaanadaha.
Kuwani waxay ahaayeen talooyinkeenna ka dib tijaabooyinka alaabooyinka Hay'adda ee ku saabsan shaqada, waxaan rajeyneynaa in hadda aad haysato fikrad cad oo ku saabsan sida la isugu yimaado shaqo guriga ah adigoon dadaal badan lahayn iyo alaab tayo tayo leh leh, maxaad sugeysaa?
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Ku aamin aamin jiir iyo teebabka shaqada, ma u qalantaa?
Sidee u adkeysanayaa Xiaomi Redmi Note 9 Pro